Maitiro Ekubata Nemumwe Munhu Anodzokorora Asingaremekedze Yako Miganhu - Ukama
Maitiro Ekubata Nemumwe Munhu Anodzokorora Asingaremekedze Yako Miganhu
Vanhu havawanzoita basa rakanaka rekuremekedza miganhu yemunhu. Dzimwe nguva zvinokuvadza, dzimwe nguva hazvisi.
Dzimwe nguva zvaunotarisira zvinogona kunge zvisingaenderane nezvinodiwa nevamwe vanhu. Iwe une wekupedzisira kutaura pane zvauri uye usingade kugamuchira.
Asi kana iwe uine runyorwa rurefu rwezvinodikanwa pamabatiro aunotarisira kubatwa kana kushandura izvo zvinodiwa nguva zhinji, unofanirwa kutarisira kuti vanhu vatadze kuramba, kana kurega kuva nehanya.
Iyo inodarika mutsetse kubva kune huremekedzo kuzviremekedza uye miganho kusvika kungova wepamusoro-kugadzirisa uye unogombedzera.
maitiro ekubata nemunhu ane hushoma hwepamoyo ungwaru
Pane mibvunzo mishoma yaunoda kuzvibvunza iwe kana mumwe munhu asingazoremekedze miganhu yako.
Muganhu unonzwisisika here? Inoremekedza miganhu yemumwe munhu here?
Zvakajairika kuti vanhu vanyatso-gadzirisa pavanenge vachiedza kushanda kuburikidza nehupenyu hwavo nyaya. Iwe unogona kuona kuti iwe unogadza zvisina kunaka miganho kana iwe wakamborwira nemiganhu kare.
Maka nguva pfupi yadarika akabuda muhukama hwakaipa. Iye wekare akamubiridzira pamwe chete nemurume wake wepamoyo shamwari mushure mekunge Maka amutenda kuti aremekedze kuzvipira kwehukama.
Mako anopinda muhukama uko musikana wake mutsva zvakare ane murume wepamoyo shamwari, zvichimuita kuti anzwe kunetseka uye kusagadzikana. Haatomboda kuti agumise hushamwari, asi anoramba achimanikidza uye achinyunyuta nezvazvo kwaari, achivimba kuti achamira kana kubvisa hushamwari.
Maka anoona izvi sekumisikidza muganhu wepfungwa, saka haazokuvadzwa zvakare. Muzvokwadi, hunhu hwekumanikidza uye hwekushusha izvo musikana wake mutsva waasingafanire kuregerera. Anovimba naye, kana kuti haadaro. Muganhu iwoyo hauremekedze mumwe wake mutsva.
Nzira yakanakisa yekuona kuti muganho wako unonzwisisika here nekuteerera kune munhu wauri kunetsekana naye. Kana ivo vachigona kutsanangura idambudziko ripi ravari kuita nemuganho, ipapo unogona kuona kuti muganho wako wakanaka here kana kuti kwete.
Miganhu yangu inochinja sei?
Miganhu haisi nguva dzose yakaoma uye inokurumidza chinhu. Dzimwe nguva pane zvisizvo kumitemo. Unogona kuona kuti muganho wawakagadzika haukushande nenzira yawaifunga kuti yaiita kana kuti inodzora zvakanyanya.
Iwe unogona kuzviwana iwe pachako uchida kugadzirisa miganhu yako kana iwe wakura zvakanyanya kugadzikana nemunhu kana uchida kuvapa mukana.
Zvinokwanisika zvakare kuti iwe unogona kuve nekumwe kupokana kwekutanga nemunhu sezvo imi mese muchiedza kufembedza uye nekuyera kuti kune ako maringe miganhu.
Iwe uchazoda kutora nguva uye kunyatsofunga kuti ndeipi yemiganhu yako inochinjika uye isiri iyo. Kune mamwe marudzi emiganhu uye zvitendero izvo vanhu vasingakwanise kuchinjika nazvo. Zvinogona kunge chiri chinhu chavanoona chisina kunaka mutsika, vanonzwa kuchikuvadza kwavari, kana ivo vangofunga kuti uyu muganho hauna kuchinja.
Muenzaniso wakanaka ungave uchibiridzira muhukama. Vamwe vanhu vanosarudza kugara voshanda, kugadzirisa chero chakatyoka nekuchengetedza hukama. Uye vamwe vanhu vanobva vapedza hukama uye vobva vaenda, sezvavanoona kubiridzira sekutyora kwakakosha kwekuvimba uye kuremekedza kwavasingakwanise kuregerera kana kuregerera.
Hapana sarudzo haina kunaka. Izvo zvese zvinoenderana nemunhu ane muganho uye nemashandiro aanosarudza kuve nawo. Zvakanaka kana munhu wacho afunga kuyedza uye kuzviita. Izvo zvakare zvakanaka kana munhu akasarudza kuti ndiko kupera kwehukama, uye hapana chimwe chakasara kuti chiite kunze kwekusiya.
murume wako paanokutora sezvisina basa
Funga nezvekuchinjika kwemuganho uri kusundidzirwa. Pane here mukana wekuchinjika kugadzirisa nekuvaka hukama? Kana kuti ndechimwe chinhu chaunonzwa kuti unofanirwa kumira wakasimba pachiri?
Iwe unofanirwa kurega kubva kumunhu here?
Ngatifungei kuti muganho wako unonzwisisika, kuti hauchinjike, asi munhu wacho achiri kusunda. Iye zvino unofanirwa kuita sarudzo yekuti unoita sei nemunhu uyu.
Iwe unogona kuona kuti maitiro avo akajairika haana hutano kana kukodzera uye wotama zvachose. Iwe unogona zvakare kuona kuti kunyangwe iwe uchida kuita izvo, haukwanise nekuda kwemamwe mabasa, sekunge kana munhu wacho achishanda kana nhengo yemhuri inozopandukira vamwe vanhu kukumukira.
Kuregedza basa kunogona kuve sarudzo iri nani pane kuenda kusaonana kana mamiriro acho asingabvumire, kana kana kuenda pasina kusangana hakuna basa.
Nzira dzekudzima dzinosanganisira:
zvekuita iwe uchinetseka
1. Chengetedza kutaurirana kwese kungori bhizinesi - hapasisina hurukuro dzepasichigare nemunhu akapfuura tsika dzakanaka.
2. Usapedze chero nguva nemunhu wausingafanire.
3. Usaite kana kusangana nehunhu husina ruremekedzo. Ivo vanogona kunge vari kungoedza kukutsamwisa iwe, saka vane chikonzero chekudyidzana newe kana kuvapa mabara ekupenda iwe mune yakashata mwenje.
4.Gara wakanyarara kana kufamba uchibva panhaurwa dzevanhu. Izvi zvinosanganisira kufona. Zvakanaka kuudza mumwe munhu kuti hausi kuzobvumidza hunhu hwavo uye kupedzisa kufona.
Rangarira, iwe haugone kudzora zviito zvevamwe. Miganhu yako ichabatsira kuvazivisa uye kuvatungamira, zvakadaro. Kana iwe ukasamira padhuze kuti ushivirire kusaremekedza kwavo, ivo vanozopedzisira vawana meseji kuti hausi kuzoshivirira kuve nekukanganiswa miganhu yako.
Unogona kuona zvichibatsira kufanosarudza nguva yaunoda kupa munhu kana uchida kurega.
Kufona kweawa-nguva kunogona kunge kusiri kubhadhara, asi kana kukaenda zvakanyanya kana kutanga kudzungaira munzvimbo isina ruremekedzo, zvakanaka kuipedza. Kuremedza nguva kunogona kubatsira zviitiko uko iwe zvausingakwanise kana kusada kuenda kuzere hapana kusangana.
Handifanirwe kuenda kuonana?
Kune vamwe vanhu vasingazopindure kana kuremekedza miganhu. Muchiitiko ichocho, iwe unogona kuona kuti sarudzo yakanakisa yehutano hwepfungwa uye miganhu ndeyekusaonana nemunhu iyeye.
Kuenda pasina kusangana kunogona kuva chinhu chinonyengera, uye iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti waongorora seimwe sarudzo zhinji sezvinobvira.
Ndezvipi zvinangwa muhukama
Vazhinji vedu tinoda kuona zvakanaka mune vedu vadiwa uye tofunga vanokwanisa kuchinja kana vachinyatsoda, asi pakupedzisira, unoona izvozvo havasi vese vanoda. Vanhu vazhinji vanofara kupfuura kurarama uye vanokura mune kwavo nhamo nekuti inzvimbo yenyaradzo kwavasingade kutora mutoro wehupenyu hwavo uye kukura.
Kana iwe ukaona kuti munhu anogara achikusiya iwe wakaneta, uchishushikana, wakatsamwa, kana kuneta, saka inogona kunge iri nguva yekuyera kuti uone kana usiri kumuda iye munhu muhupenyu hwako zvachose.
Usarega vamwe vanhu vachikunyadzisa kuti ubvume maitiro akaipa. Pakupera kwezuva, iwe ndiwe unoda kugara nawo, saka unofanirwa kuita zvakanakira hutano hwako hwepfungwa uye hwepfungwa.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezve mumwe munhu anogara achityora yako miganho? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
Ndezvipi Zvinotemerwa Miganhu Uye Unoisa Sei Vane Hutano?
Maitiro Ekuremekedza Miganhu Yevamwe: 4 Akakosha Matipi
Setha Iyi Miganhu gumi Nemiviri Yehukama Hunofadza Uye Hwehutano
nhengo nyowani yemhuri yewyatt
kufunga sei ndisati ndataura
zvinhu zvakanaka zvekuitira musikana
yakawanda sei blackpink inokosha
maitiro ekuremekedza kuramba zuva
sei ndichifinhwa kudaro